နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: ကလေးလေးသို့
မေမေတို့မှာ ကလေးလေး ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိပီးတဲ့နောက် ဘယ်မှာမွေးမလဲ ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ပေါ်လာပါလေရော။ မြန်မာပြည် ပြန်မွေးမလား ဂျပန်မှာ မွေးမလား။ မေမေက ဖေဖေ့အနားမှာပဲ နေချင်လို့ ဂျပန်မှာပဲ မွေးချင်တယ်။ ဖေဖေကတော့ ဂျပန်မှာဆို ဆွေမရှိ မျိုးမရှိနဲ့ မေမေ့တစ်ယောက်တည်း အားငယ်နေမှာဆိုပီး မြန်မာပြန်မွေးစေချင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို... သိုင်းသိုင်းဝန်းဝန်းနဲ့ကို...။
တခါတလေ..မေမေလဲ ကြောက်တာပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ မေမေ့ဘေးမှာ ဖေဖေက လွဲပီး ဘယ်သူမှမရှိတာကို တွေးပီး ကြောက်တာ ။ မေမေ့မှာ သူများတွေလို ခေါ်စရာ မေမေလဲမရှိ ။ ရှိတဲ့မမ ကလေးလေးရဲ့ ကြီးကြီးကျတော့ ခေါ်လို့မလွယ်။ အိမ်မှာ သူမရှိလို့ မဖြစ်ဘူးကိုး။ လေဖြတ်နေတဲ့ မေမေ့ ကြီးဒေါ်ရယ် ကလေးလေး ဘိုးဘိုး ရယ်နဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ ပတ်ချာလည်နေတယ်။
ဖေဖေကတော့ ကလေးအန်တီလေးကို ခေါ်စေချင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေမေ့ အိမ်မှာက သူမရှိလို့လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူးဆိုတော့... မေမေ့မိသားစုကလဲ အဝေးကနေပဲ စိုးရိမ်ပူပန်လို့ရတယ်။ ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ မေမေ မြန်မာပြည် ပြန်မွေးရင်လဲ သူတို့တွေက စိုးရိမ်ကြတယ်။ ပထမတကြိမ်တုန်းကတောင် မေမေ ပြန်တုန်းမှာ အသက်ရှု ရပ်သွားတာ ၂ခါတောင်ဆိုတော့ သူတို့လဲ စိတ်သိပ်မချကြဘူး။ ပီးတော့ ဆရာဝန်တွေကိုလဲ မေမေတို့က ကြောက်သေးတယ်။ အသက်ကြီးမှ ကလေးမွေးရတော့ သူတို့စိုးရိမ်မယ်ဆိုလဲ စိုးရိမ်စရာပေါ့။ ဒီမှာကတော့ မေမေတို့အသက်လောက်က စာမဖွဲ့ဘူး။ မေမေ့ထက် အများကြီး အသက်ကြီးသူတွေလဲ မွေးနေကြတာပဲလို့ ဆရာဝန်က စိတ်မပူဖို့ပြောတယ်။ ကလေးလေး..လူ့လောကထဲ ရောက်မယ်တောင် မကြံသေးဘူး..ကလေးလေးအတွက် အမျိုးစုံ တွက်ချက်နေကြပီ။ မေမေတို့ဖက်က အခုမှ သားဦးဆိုတော့ ကလေးလေးကို မျှော်နေကြပီ။ ဖေဖေတို့ဖက်ကလဲ ကလေးက ဒုတိယမြောက် ပေါ့။ သူတို့တွေလဲ မျှော်နေကြတာပေါ့။ ကလေးလေးရေ............
ကလေးရေ... မေမေတို့တွေ ကလေးအတွက် အစပထမပိုင်းမှာ ဆေးရုံမရလို့ မေမေတို့ ပြာလိုက်ကြသေးတယ်။ မေမေပြနေတဲ့ အိမ်နားက ဆေးရုံးက ဈေးကြီးတဲ့အပြင် မေမေက အဲ့က ဆရာဝန်ကို သိပ်မကြိုက်ဘူး ရုပ်လဲမချောဘူးလေ..။ ပီးတော့ သူက မေမေ့ကို အခါးတွေပဲ စားခိုင်းလို့ မေမေက အဲ့ဆေးရုံမှာ မပြချင်ဘူး။ပီးတော့လဲ အဲ့ဆေးရုံက မေမေ အရင်နေတဲ့ မြို့မှာပြနေတဲ့ဆေးရုံတွေလောက် မကျယ်မကြီးဘူးလေ။ ဒါနဲ့ အခြားဆေးရုံကို ပြန်ရှာရတာပေါ့။
အဲ့ဒီမှာလဲ မေမေက ဖေဖေ့ကို ပြောတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ အပြည့်မို့လို့ လက်မခံဘူး။ စောစောစီးစီး ဆေးရုံရွေးရအောင်ဆိုတာကို ဖေဖေက ဂျပန်မှာ ဘယ်သူမှ လမ်းဘေး မမွေးခိုင်းဘူးဆိုပီး ပြောတော့ မေမေလဲ ပထမတော့ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်တာပေါ့...။ ဒီလိုနဲ့ ကလေးလေး ကို အိမ်နားကဆေးရုံမျှာဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက်က ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ပြအပီး မေမေတို့ ဆေးရုံအရှာမှာ တော့..ကလေးလေးရေ..ဖေဖေနဲ့မေမေ ရန်ဖြစ်လိုက်ရတာ။ ဖေဖေလဲ အတော် မောသွားရှာတယ်။ ဟိုဆေးရုံက လက်မခံ ဒီဆေးရုံက လက်မခံနဲ့ဆိုတော့။ ဆေးရုံတိုင်းက ကလေးလေးမွေးမဲ့ သြဂုတ်လ အကုန်အထိ အပြည့်ဖြစ်နေလို့ဆိုပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေက နောက်ဆုံးတော့ အိမ်နားက ဆေးရုံမှာပဲ မွေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့တာပေါ့။ ဒါပေမဲံ့ ဖေဖေက မေမေ့စိတ်တိုင်းကျ နောက်ထပ်ဆေးရုံတခုနဲ့ ထပ်ဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့ အခါ မေမေတို့ ကံကောင်းစွာပဲ ဆေးရုံ အသစ်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆေးရုံက ကျယ်တယ် ကြီးတယ်။ မေမေကြိုက်တယ်။ ဈေးကလဲ ပုံမှန်ပဲ။
ကလေးရေ...ဂျပန်မှာ ကလေးမွေးတာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းတာ မဟုတ်လို့တဲ့။ ကလေးအတွက် မေမေ့ကျန်းမာရေး အာမခံကဒ် သုံးလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် မေမေတို့က မြို့နယ်ရုံးကို သွားပီး မေမေဗိုက်ပြတိုင်း အကုန်အကျများတဲ့အတွက် မြို့နယ်ရုံးက ပြေစာတအုပ်ထုတ်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ပြပီး ဆေးရုံတခါ သွားတိုင်း တရွက်တရွက် ယူသုံးတာတောင် တခါသွားတိုင်း ဂျပန်ငွေ ၁သောင်းနီးပါးကျတယ် ။ ဒါတောင် သွေးစစ် ဘာစစ်ဆို တစ်သောင်းကျော်ကျတယ်..ကလေးရေ။ မြန်မာငွေနဲ့ဆို အကျမ်းဖျဉ်း ၁သိန်းကျတာပေါ့။ မြို့နယ်ရုံးကနေပဲ ဖေဖေက ကလေးပုံလေးနဲ့မိခင်ပုံလေးပါတဲ့ ကဒ်ကလေးကို မေမေသွားလေရာဆောင်ဖို့ယူလာပေးတယ်။ အခု မေမေ ရွေးလိုက်တဲ့ဆေးရုံက ကလေးမွေးတဲ့အချိန်ကျရင် .ယန်း ၄၅ သောင်း ကနေ သောင်း၅၀ အထိ ကုန်ကျမယ်တဲ့။ မေမေတို့ကို မြို့နယ်ရုံးက ပြန်ပေးမှာက ၄၂ သောင်း။ တော်သေးတာပေါ့..ကလေးရယ်။ မေမေတို့သိပ်မစိုက်ရဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လတိုင်း ပြတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကတော့ ပြန်မရဘူးပေါ့ကလေးလေးရေ..။
ကလေးလေး ရေ.. ဂျပန်မှာ ကလေး မွေးပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ နဲသွားလို့ ဆေးရုံတွေမှာ နေရာမရတာတဲ့ ကလေးရေ...။ မေမေတို့ကို တချို့ကလဲ ပြောကြတယ်။ စပြထဲက ဘာဖြစ်လို့မသိဘူးဆိုပီးပြရင် ဆေးရုံက ကလေးမွေးဖို့ လက်မခံဘူး ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကလေးရေ... တိုကျိုက ဆေးရုံကြီးတွေ့လဲ အခြားဆေးခန်း ဆေးရုံက မိတ်ဆက်စာမပါရင် လက်မခံဘူးတဲ့။ အထူးအဆန်းပဲ။ မပါရင် ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးရတာလဲ မေမေ့အတွက် အံ့သြစရာပေါ့လေ..။ မေမေကတော့ ဟိုဖက်ဆေးရုံက မိတ်ဆက်စာပါတော့ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ ဖေဖေက ပါ မေမေနဲ့အတူ ပြတဲ့အခါ မိတ်ဆက်စာမပါလို့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးလိုက်ရပါရောလား။
ကလေးလေးရေ.. မေမေဆေးရုံ သစ်လဲ ရောက်ရော မေမေ့ကို ဆီးတွေ သွေးတွေ စစ်တယ်။ ပထမဆုံး မေမေ့သွေးကို ဆေးထိုးပြွန် ၃ခုထဲကို ဖောက်ထည့်တယ် ကလေးရေ။ ပီးတော့ ဆီးစစ်ပေါ့။ နာ့စ်မက ဆေးထိုးအပ်ကို ပြန်အထုတ်မှာ မေမေ့လက်နာလိုက်တာ ကလေးရယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ပေါ့။ ကလေးရေ... နှင်းတွေကျပီး လေတွေထန် တဲ့နေ့ပေါ့။ မေမေ့မှာ ချော်မလဲ အောင်မနဲ အားတင်းပီး ဆေးရုံရောက်အောင် လျှောက်ရတယ်။ ဆရာဝန်က ပြောတယ် ကလေးက ကျန်းမာပုံရတယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ် ကလေးရေ.. ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ကလေးလေးက လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့....တချိန်လုံးလှုပ်နေတယ်။ ဖေဖေနဲ့မေမေမှာ အဲဒါလေးကို ကြည့်ပီး ကြည်နူးလိုက်ရတာ။ Feb-6
ကလေးရေ... ဒုတိယအကြိမ်သွားတော့ လေမိုးလွတ်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ မေမေ့ သွေးစစ်တဲ့ အထဲမှာ ပိုးတမျိုးတွေ့တယ်တဲ့။ အဲ့ဒီသွေးကြောင့် ကလေးလေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ပြောလို့ မေမေ့မှာ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ ကလေးရေ..။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသွေးဟာ မေမေငယ်ငယ်တည်းက ရှိနေတဲ့ ပိုးလား ဂျပန်ရောက်မှ ကူးတဲ့ပိုးလားဆိုပီး ထပ်စစ်ဖို့ လုပ်ကျပြန်တယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ကလေးလေးဆီမှာ အရိုးတွေထွက်လာတာ မေမေတို့တွေ့ကျရပီ..ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ လှုပ်နေတဲ့ ကလေးကို တွေ့ပီး ပီတိဖြစ်ရပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်က အထက်က စကားဆိုတော့ မေမေ့မှာ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ။ ဒါနဲ့မေမေက ကလေးကို ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲမေးတော့ ကလေးက အနီကွက်တွေထွက်တာတို့ အဖျားကြီးတာတို့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် ဦးနှောက်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ မေမေ့မှာ ရူးမတတ်ပေါ့။ ဆရာဝန်နဲ့ ကလေးဖေဖေကတော့ ပြောပါတယ်။ ဘာမှမသိရသေးပဲနဲ့ စိတ်မဆင်းရဲပါနဲ့တဲ့။ သိတဲ့အခါကျရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတို့ဘာတို့ လုပ်မရဘူးလားလို့ မေမေက မေးတော့ ..ဘာမှန်းမသိသေးပဲနဲ့ စိတ်ပူနေတာ စိတ်ပင်ပန်းတယ်တဲ့..။ ဒီလိုနဲ့ မေမေ့မှာ သတိရတိုင်း ဘုရားစာရွတ်ဖြစ်နေတယ်။ ၂ဖက်မိဘတွေကိုလဲ မေးနဲ့ စိတ်တွေပူရတာပေါ့။ အဲ့ဒီနေ့က မတ်လ ၆ ရက်နေ့ပေါ့။ ဆရာဝန်ဆီကပြန်တော့ မေမေ့ကို သွေးထပ်စစ်ခိုင်းတယ်..ကလေးရေ..။ မေမေ့လက်ထပ်နာပြန်တာပေါ့..။
ကလေးလေးရေ..ဒီလိုနဲ့ ဧပြီလ ၃ရက် မှာ ကလေးလေးကို လာပြရပြန်ရော။ တော်သေးတယ်..ကလေးရေ... မေမေ့သွေးထဲမှာ အဲ့ပိုး မရှိတော့ပြန်ဘူးတဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ မေမေနဲ့ဖေဖေ ဟင်းချနိုင်တော့တယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ရင်တမမနဲ့ ဖေဖေ့ကို ဖွင့်မပြောပေမဲ့ မေမေရင်ပူနေခဲ့တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကလေးရေ အဲ့ဒီနေ့က လေရော မိုးရော တအားပြင်းတယ် ကလေးးရေ...။ မေမေ့နဲ့ဖေဖေ မနဲလမ်းလျှောက်ရတယ် ။ လေက လွှင့်မတတ်ပဲ။ ကလေးလေးရေ........... ဧပြီလ ၂ရက်နေ့က ကလေးလေး မေမေ့ဗိုက်ထဲမှာ စလှုပ်တာကို ခံစားသိရလို့ ဖေဖေကတော့ အတော် ပျော်နေလေရဲ့။ ကလေးလေး... ကျန်းမာဖို့ မေမေ အမြဲဆုတောင်းနေတယ်နော်...။ ကလေးလေးရေ.... ကလေးလေးကို ဘာလေးမှန်းမသိရသေးဘူး။ ဖေဖေကတော့ သားသားလေး လိုချင်တာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖေ့ကို ဘုန်းဘုန်းတရားဟောပီးကတည်းက ဖေဖေက သားသားလေးမှ သားသားလေးဆိုတဲ့ စကားကို မပြောတော့ဘူး။ တကယ်တော့ ဖေဖေနဲ့မေမေက ဘာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကလေးကို ချစ်မှာပါ။ ဖေဖေကတော့ သမီးမိန်းကလေး ဆိုရင် သူ စိတ်ပူလွန်းလို့ ဆိုပီး စိုးရိမ်နေတာ ကလေးလေးရဲ့...။
ဖေဖေ့ဖက်က ဆိုလဲ ကလေးဘွားဘွားက မိန်းကလေး .
ဘိုးဘိုးက ယောင်္ကျားလေးလိုချင်တာတဲ့။ မေမေ့ဖက်ကတော့ မိန်းကလေးပဲ လိုချင်ကြပေမဲ့ ကလေးရဲ့ ကိုကိုကြီး တစ်ယောက်ပဲ (မေမေရဲ့ အချစ်ဆုံး တူပဲ ) ယောင်္ကျားလေးလိုချင်တယ်။ ဘာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အချိန်တန်ရင်တော့ မေမေ့ဖက်က မြေးဦး သားဦးဖြစ်လာမဲ့ ကလေးလေးကို အားလုံးက နွေးထွေးစွာ ကြိုနေကြတယ် ကလေးလေးရေ.......။
ဖေဖေ့ဖက်ကလဲ ကလေးလေးကို ကြီုဆိုနေတယ်..ကလေးလေးရေ...
Posted by နောင်ဂျိန် at 3:11 PM
Thandar Lwin April 6, 2013 at 12:24 PM
နွေးထွေးစွာ ကြိုနေတဲ့ အိမ်ထဲကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ လာခဲ့ပါ ကလေးလေးရယ် ။
ဘလော့ နာမည်လေး ကြိုက်လိုက်တာ နောင်ဂျိန်ရယ်။
မေမေ ရာ ကလေးလေးပါ ကျန်းမာပါစေ နော်။
တန်ခူး May 9, 2013 at 7:25 AM
မိခင်မေတ္တာက ကလေးလေးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားကတည်းက စတယ်ဆိုတာ မိခင်အသစ်လေးရေးထားတဲ့ ဒီစာကသက်သေပေါ့ညီမရေ. ကလေးလေးကြီးရင်ဖတ်ဖို့ နောက်ဆက်ရေးပါဦး မေမေကလေးလေးရေ. Take care
ဘလော့ကို ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲ ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာ...
Wishing you be healthy!!! Take care at the time of pregnant :-)
Write more about your little one, waiting for your new posts.
I'm one of your blog's fan :-)))